Xaaladda Donald Trump maxay ku dambeyn doontaa? - BBC News Somali
Xaaladda Donald Trump maxay ku dambeyn doontaa?
19 Disembar 2019
Arrintan ayaa la aaminsan yahay in ay saameyn ku yeelan karto Trump
Madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump ayaa noqonaya madaxweynihii saddexaad ee Mareykan ah oo Kongreska Mareykanka ay si rasmi ah ugu soo oogaan dacwad ay ku dalbanayaan in xilka lagaga xayuubiyo.
Trump ayaa xil ka qaadistiisa waxaa loo gudbinayaa aqalka senate-ka ee Mareykanka, kaas oo go'aanka kama dambeysta ah ka gaari doona xil ka qaadistiisa.
Kongreska ayaa u codeeyay labo dembi oo ay shegeen in uu Madaxweynaha galay, kuwaas oo kala ah in uu ku takri falay awoodda xafiiska iyo in uu ka tallaabsaday sharciga Mareykanka.
Labadan arrimood ayaa ahaa kuwo salka ku haya arrimo xisbi, oo waxaa inta badan xildhibaanada dimuqraadiga ay isku raaceen xil ka qaadista Trump, halka xisbiga uu ka tirsan yahay ee Jamhuuriga na ay kasoo horjeedsteen.
Saddex meelood labo meel ayaa loo baahan yahay, si xildhibanaada aqalka sare ay xilka uga qaadaan madaxweyne Trump.
Aqalka senetka Mareykanka waxaa uu ka kooban yahay 100 xubnood, waxaana xisbiga uu ka tirsan yahay Trump ee Jamhuuriga ay halkaas ku leeyihiin 53 xubnood, balse dimuqraadiga ayaa si ay arrinta ay soo jeediyeen ay u dhaqan gasho waxay u baahan yihiin 67 xildhibaan, taas oo micnaheedu yahay in ay u baahan yihiin 20 xildhiban po dheeraad ah, kana mid ah xisbiga Jamhuuriga si ay tiradu u gaarto 67 xubnood.
Khubarada arrimaha siyaasadda ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in ay adag tahay in arrintaas ay meel mariyaan xildhibaanda senate-ka ee Jamhuuriga ay aqlabiyadda ku leeyihiin, iyagoo eegaya sumcadda xisbiga iyo saameynta ay ku yeelan karto doorashooyinka soo socda.
"Way iska caddahay in aqalka sare oo ay ku badan yihiin xisbiga Jamhuuriga aysan u codeyn doonin in xilka laga qaado Trump", sidaas waxaa yiri tifatiraha BBC-da ee waqooyiga Mareykanka.
Sidoo kale hogaamiyaha aqalka sare ee xisbiga Jamhuuriga, Mitch McConnell ayaa ku gacan seyray soo jeedinta xil ka qaadista Trump, waxaana uu sheegay in uusan dhexdhexaad ka noqon doonin marka ay timaado dhageysiga dacwadaha lagu soo oogay Trump.
"Ma ihi garsoore dhexdhexaad ah oo arrinta waa mid siyaasadeed, mana jirto wax loo gardhigto halkan, waxaana rabaa in aan sii sheego in go'aan ka duwan kan aqalka Kongreska uu kasoo bixi doono aqalka senate-ka,"ayuu yiri Mitch.
Taariikhda Mareykanka, labo madaxweyne ayaa horay loogu oogay dacwad noocan oo kale ah, waxayna kala ahaayeen Andrew Johnson iyo Bill Clinton oo Kongreska ay soo jeediyeen xil ka qaadistooda, balse senate-ka ay ku gacan seyreen.
Mooshinka ka dhanka ah Trump ayaa soo socday in muddo ah
Inkastoo tallaabadan la damacsan yahay in xilka lagaga qaado Trump ay dhaawac u geysan karto ol'olihiisa doorashada, haddana waxaa lagu soo warramayaa in siyaasiyiinta xisbiga dimuqraadiga ee laga soo doorto halka ay ku badan yihiin tagaeerayaasha Trump ay ku adkaato in mar kale dib loo soo doorto.
War qoraal ah oo ka so baxay aqalka cad ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in Madaxweynaha uu aad ugu kalsoon yahay in aqalka sare ay meesha ka saari doonaan xil ka qaadista ay u codeyeen Kongreska.
Madaxweyne Trump ayaa ku eedeysan "khiyaano qaran" iyo in dhiggiisa Ukraine uu ku cadaadiyay sidii uu baaritaan ugu sameyn lahaa madaxweyne ku xigeenkii hore ee Mareykanka, Joe Biden oo horay uga soo shaqeeyay shirkadda gaas-ka ee Ukraine.